आफ्नो खेमामा सबैभन्दा शक्तिशाली निधिले देउवालाई छाड्दा के होला ? « Sagarmatha Daily News
आफ्नो खेमामा सबैभन्दा शक्तिशाली निधिले देउवालाई छाड्दा के होला ?
नेपाली काँग्रेसको भदौका लागि तोकिएको महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा सभापति शेरबहादुर देउवा चिन्तामा परेका छन् । उनलाई आफ्नै खेमाका नेताहरुलाई साथमै राखिरहन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता परेको हो ।
पछिल्लो समय उपसभापति विमलेन्द्र निधिले देउवाको साथ छाडेका छन् । देउवाले सभापतिको उम्मेदवारी दिने बताएलगत्तै निधि पनि सभापतिको दाबेदारी प्रस्तुत गर्दै बढेका छन् । उनले देउवाको साथ छाडेका छन् । पछिल्लो समय बुढानिलकण्ठ जान छाडेका छन् । बरु निधि आफै पक्षमा माहोल बनाउन सक्रिय भएका छन् ।
देउवाको खेमामा उनीपछि सबैभन्दा शक्तिशाली निधि नै हुन् । निधिले छाडेमा उनको शक्ति घट्न सक्छ । विशेषगरी २ नम्बर प्रदेश र मधेशमा निधिको पकड बलियो छ ।
विगतमा देउवालाई प्रकाशमान सिंहले साथ छाडेका थिए । नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिक हुँदा साथमै रहेका सिंहले काँग्रेस एकीकरणपछि देउवाको साथ छाड्दै गए । सुशील कोइराला सभापतिको उम्मेदवार बन्दा सिंह महामन्त्रीको उम्मेदवार बने । देउवालाई सिंहले छाड्दा चुनावमा पराजय व्यहोर्नुपरेको थियो ।
यसपटक निधिले साथ छाड्दा देउवालाई त्यस्तै धक्का पर्न सक्छ । विमलेन्द्र निधि, डा. सशांक कोइराला , प्रकाशमान सिंहबीच शक्ति बाँडफाँडको सहमति विकास भइरहेको छ । निधि, कोइराला र सिंह मिलेमा काँग्रेसभित्रको माहोल नै परिवर्तन हुनसक्छ ।
विगतमा देउवा खेमाका डा. मीनेन्द्र रिजाल, बलबहादुर केसी, दिपकुमार उपाध्यायलगायत हस्तीहरु उनको पक्षमा छैनन् । देउवा नेतृत्वको काँग्रेस प्रजातान्त्रिक हुँदा नेविसंघको सभापति बनेका कल्याण गुरुङ्ग पनि देउवा विरोधी खेमामा छन् ।
यद्यपि, देउवाले विरोधी खेमाका केही नेताहरुलाई पक्षमा पार्न सकेका छन् । जसमध्ये विश्वप्रकाश शर्मा, गाविन्द भट्टराई, फर्मुल्लाह मन्सुरलगायत छन् । उनीहरु विगतमा देउवाविरोधी पक्षमा थिए । तर, कोइराला, सिंह र निधि एकजुट भएर महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि अगाडि बढेमा देउवा खेमाबाट नेताहरुले क्याम्प परिवर्तन गर्न सक्छन् ।